Gedo:-Waxaa saaka degan magaaladda Beledxaawo ee gobolka Gedo kadib markii shalay halkaasi dagaalo culus uu ka dhacay magaalada Beledxaawo dagaalkaas oo shalay dhexmaray ciidamada DFS iyo Ahlusuna oo isku dhinac ah iyo ciidanka Ururka Al-Shabaab .
Dagaalka shalay ayaa waxaa uu qeystay khaasaro kala duwan waxaana shalay galinkii hore magaalada la wareegay ciidamada Al-Shabaab waloow ay ka baxeen galinkii danbe ee shalay waxaana halkaas ku soo laabtay ciidamada huwanta ah ee ka kooban DFS iyo kuwa Ahlusuna.
Waxaa kale oo saaka soo galay magaalada Beledxaawo ciidamo ka tirsan dalka Ethiopian kawaas oo ka soo talaabay degmada Doolow ee gobolka Gedo iyada oo dib loo furay goobihii ganacsiga ee magaalada Beledxaawo ee gobalka Gedo waxaana aad ku arkeysaa Bakhaaradii qaar oo ay ka muuqdaan rasaas tiro badan .
Guddoomiyaha Beledxaawo Diyaad Cabdi Kaliil ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalkii shaley uu ahaa mid si kadis ah lagu soo qaaday balse haatan ay ciidamada DFS iyo kuwa Ahlu Suna ay ku sugan yihiin Beledxaawo.
Afhayeenka howlgala ee Ururka Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abu Muscab ayaa sheegay dagaalkii shalay in ay khasaaro badan gaarsiiyeen ciidamada DFS iyo kuwa Ahlu suna ayna gaareen ujeedadii ay ka lahaayeen dagaalka wuxuuna sheegay in ciidamadooda ay dib uga saareen magaalada Beledxaawo.